Banyere Anyị - Shandong Oree Laser Co., Ltd
Anyị ukara website
Eriri laser cutter
Eriri laser welara
Hand-ẹkenịmde laser ịgbado ọkụ igwe
ịgbado ọkụ Sample
WHO W E DỊ Shandong Oree Laser technology Co.Ltd
Anyị bụ ndị enyemaka ụlọ ọrụ nke Shandong OYADE otu, emi odude ke Jinan North mmepe mpaghara, JiYang ulo oru ogige, nwere 300 ọrụ, 1000 square mita nnyocha na ịzụlite center, 42000 square mita omumuihe.
IHE ANYỊ MEE
All ndị a equipments e ọtụtụ-eji na mmepụta nke electronic ngwa, integrated na sekit na sekit,
Telecommunication equipments, kọmputa, akpaaka akụkụ, iko na ngwa anya nkeji, ewu ihe,
ngwaọrụ ahụike, jewelries, nkwakọ ihe, crafts, ejiji na uwe, n'obodo ukwu ọmụma na ọzọ ubi.
Onye ọ bụla ngwaahịa si Oree Laser a nditịm ile dị ka ISO9001 (QCS) ọkọlọtọ tupu ọ na-etinye na ndị ahịa. Ọtụtụ laser akụrụngwa usoro nwetaworo OA, FDA akwụkwọ.
Oree Laser-elekwasị anya na ahịa uru, na-emepụta ihe nke ka cusotmer uru karịa asọmpi. Anyị na ngwaahịa na-ere ka USA, Canada, Australia, Europe, South n'ebe ọwụwa anyanwụ Africa ect, ihe karịrị mba 80 na ebe.
Okwu: NO.19-1, Jiyang Street Industry Park, Jinan, China CP: 251400